ဒီနေ့ အင်းလျားကန်ဘောင်ပေါ်က ပုသိမ်ထီးတွေ ဖြုတ်ခိုးသွားတဲ့ ကလေက၀ တစ်သိုက် – Maharmedianews
ဒီနေ့ အင်းလျားကန်ဘောင်ပေါ်က ပုသိမ်ထီးတွေ ဖြုတ်ခိုးသွားတဲ့ ကလေက၀ တစ်သိုက်
ဒီနေ့ သင်္က်ြန်မှာ အင်းယားကန်ဘောင်က ထီးတွေ ဖြုတ်ခိုးသွားတဲ့ မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ ကလေက၀ တစ်သိုက်ရဲ့ ပုံတွေပါ
ဒီလို အလှအပကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်တဲ့သူတွေကို မျက်နှာမဖျက်ဘဲ ဒဲ့တင်ပေးတာပါ…တင်ချင်လို့ကိုတင်တာပါ..ကြည့်ကြပါ.
မိမဆုံးမဖမဆုံးမ အောက်တန်းစား ကလေကဝ အယုတ်တမာတစ်သ်ိုက်ပါ..
ထီးမမြင်ဖူး မဝယ်နိူင်လို့ အများပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ခိုးယူ ဖျက်ဆီးနေကြတာပါ….
ဘယ်လို စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ များ လူ ဖြစ်နေကြတာလဲ ဒီ စောက်ခွက်တွေကို မှတ်ထားကြ. .အဆင့်မရှိတဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင်တွေပါ. . ဒီလိုလူတွေကြောင့် မြန်နိုင်ငံမှာ နေရာတကာ အမှိုက်ဗလပွဖြစ်နေတာ ကွမ်းတွေ ရဲနေတာ
ယခုလို မျက်နှာတွေ ပြလို့ ရှက်ပြီး သေသွားမယ်ဆိုရင်လဲ ၀မ်းသာပါကြောင်း
← ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကျွဲညီနောင် နှစ်စီးတွဲ လေယာဉ်ကြီး ပထမဆုံးအကြိမ် စမ်းသပ်ပျံသန်း(Video)
အင်းလျားကန်ဘောင်မှ ဖြုတ်ယူခြင်းခံရတဲ့ ပုသိမ်ထီးတွေကို စည်ပင်က ညတွင်းချင်း ပြန်လည်ပြင်ဆင် →